विद्यार्थीहरुलाइ बेरोजगार देख्ने तपाई कस्तो पत्रकार हेमराज हेर्नुस् भिडियो सहित
पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा पत्रकार तथा सामाजिक अभियान्ता हरुको कमेन्ट् मार्फत चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ यसै बीच युवा विद्यार्थी हेमराज थापालाई बेरोजगार भनेर समाचार आए पछि हेमराज भन्छन् मेरो बारेमा अध्ययन नगरेर लेख्ने पत्रकार, पत्रकार होईन पार्टीको झोले हो ।
एउटा युटुब channel मार्फत अन्तरबार्ता दिदै हेमराज थापाले यस्ता कुरा हरु खुलाएका छन् ! पार्टीको झोला बोकेर पत्रकारिता गर्ने हरुलाइ मेरो चुनौती हो आउनुस् म संग बहस गर्नुस् ।उनी भन्छन् म पढ्दै छु तपाईंहरुले मलाई बेरोजगार भन्ने के म पढाइ छोडेर जागीर खोज्न जाउ यति
फरक होकि अरुले पढाईको साइड मा अरु काम गर्छन् मैले मेरो समय देशका लागि गलत गर्नेहरुको विरुद्धमा खर्च गरे पीडित हरुलाइ सहयोग गरे के यो मेरो कमजोरी हो रु मेरो घर बाजुरा
जिल्ला अब के मैले बोल्नै नहुने आवाजै उठाउन नहुने कुरै राख्नन नहुने के पत्रकारले हेमराज थापा बेरोजगार भनेर लेख्न मिल्छ त्यसो भए नेपालका सम्पुर्ण विद्यार्थीहरुलाइ बेरोजगार भन्नुहोस् ।
विद्यार्थीहरुलाइ बेरोजगार देख्ने तपाईं कस्तो पत्रकार हो ? संसारको सब भन्दा ठूलो बेरोजगार भनेको विद्यार्थी हो जसको certificate बाहेक केही हुदैन । विद्यार्थीलाई बेरोजगार भन्ने
पत्रकारलाई म अध्ययन गर्न अनुरोध गर्छु।
अहिले म २८ : २९ बर्षको भए जागीर गरेको छैन मेरो घरकाले भन्नू ठिकै हो । तर पत्रकारले तेस्तो भन्न मिल्छ ? हेमराजले भने तपाईहरु हाम्रो राम्रा नराम्रा काम हरु लेख्नुस् यो बेरोजगार छ त्यो बेरोजगार छ भनेर होइन ।
भिडियोमा अझै हेमराज थापा बताउछन् कि अहिले पनि बाबा कामको सिलसिलामा भारतमा श्रमिक गर्दै हुनुहुन्छ ।
२०७८ असार ५, शनिबार २२:१३ 1 Minute 133 Views